काठमाडौं । प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो तेस्रो बर्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न साधारण सभा इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
२०६४ सालमा दर्ता भै २०७४ मंसिरबाट वीमा व्यवसाय सूरु गरेको यस कम्पनीको संचालक समितिमा अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरे तथा संचालक सदस्यहरुमा सुभाष अमात्य, रामेश्वर सापकोटा, नरेश बहादुर मल्ल तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट मनिराम पोखरेल रहेका छन् ।
साधारण सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वासलात, नाफा नोक्सान, नगद प्रवाह लगायतका वित्तीय विवरणहरु समेत पारित गरेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
सुनको भाउमा निरन्तर उतार-चढाव, हेर्नुहोस् आज कति छ त प्रतितोला ?
३ कात्तिक, काठमाडौं । सुनको भाउमा तिब्र उतार–चढाव आएको छ…
वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनबाट ७८ लाख राजश्व सङ्कलन
‘आइएमई सँग यो दशै-तिहार, पाइन्छ नगद रु ५० हजार’